I-ZBox MM2 Apk Download Ye-Android [Ama-movie] - I-Luso Gamer
I-ZBox MM2 Apk Download Ye-Android [Amamuvi]
Sesivele sishicilele izinhlelo zokusebenza eziningi ezahlukene zokuzijabulisa ezihlobene namazwe ahlukene. Namuhla lapha silethe uhlelo olusha lwe-android olubizwa nge-ZBox MM2. Manje ukuhlanganisa uhlelo lokusebenza kuzonikeza okuqukethwe kokuzijabulisa okungapheli okubizwa ngesi-Burmese.
Lapho sihlola inkundla efinyelelekayo eku-inthanethi, labo bathi banikeza izici ezifanayo. I-premium futhi idinga ilayisense. Ngaphandle kokuthenga ilayisense, abasebenzisi be-android abakwazi ukujabulela okuqukethwe okuyiprimiyamu.
Yize izinkundla eziningi ezifinyeleleka ku-inthanethi zihlukaniswe ngezigaba ze-premium. Ngakho-ke ukufinyelela kulawo mapulatifomu kuyabiza. Ngakho-ke uma kucatshangelwa ukufinyeleleka kwamahhala nokulula abathuthukisi bahlele lokhu okusha Uhlelo lokusebenza lwe-Movie.
Iyini i-ZBox MM2 Apk
I-ZBox MM2 App iyisicelo se-Android esixhaswe yinkampani yangaphandle esenziwe yi-MMBOX. Ukuhlanganisa ifayela lesicelo ngaphakathi kwe-smartphone ye-android kuzovumela abasebenzisi be-android. Jabulela ukuzijabulisa kwe-premium mahhala ngaphandle kokubhaliselwe.
Ku-Google, uma sihlobanisa ukuhlaziya kosesho nemibiko ehlukene. Sabe sesithola igama lokuzijabulisa liseshwa kakhulu ku-inthanethi. Isizathu sokusesha lesi sigaba kungenxa yesimo samanje somhlaba wonke.
Njengoba wonke umuntu esazi isimo samanje. Kusukela ekuqaleni kuka-2020, umhlaba ungaphansi kokuhlaselwa ngubhubhane. Isizathu salokhu kuhlasela okukhulu kungenxa yokuba sengozini emhlabeni wonke kumasosha omzimba. Ngenxa yezingozi zempilo, amazwe amakhulu angaphansi kwemodi yokukhiya.
Ngenxa yokuvalwa okuqinile, abantu abavunyelwe ukuphuma ngaphandle. Ngakho-ke esimweni esinjalo, abantu baqala ukucinga izinkundla zokuzijabulisa zamahhala eziku-inthanethi. Lapho bengasakaza kalula khona izinhlelo zabo abazithandayo kufaka phakathi uchungechunge mahhala.
Igama I-ZBox MM2
Usayizi 17.95 MB
Igama lephakheji com.mmzbox.zvdo
Ngoba izinkundla eziningi ezifinyeleleka ku-inthanethi ezidumile ziyi-premium futhi zidinga ukubhaliswa kwe-premium. Esimeni sezinkinga zomnotho, abantu abakwazi ukutshala imali ngokuthenga okubhaliselwe okukhokhelwayo.
Njengokulinganisa ku-inthanethi, izindleko zokubhalisa zingadlula amakhulu amadola. Lokho kuyabiza futhi akuthengeki kubantu abajwayelekile. Ngakho-ke uma kucatshangelwa izidingo zabantu kanye nezicelo, abathuthukisi baphumelele ekuhleleni le nkundla ephelele.
Khumbula ukuthi uhlelo lokusebenza esilusekelayo lapha olwangempela futhi lunikeza ukuzijabulisa okungapheli. Kumahhala ngaphandle kokubhaliswa noma ukubhalisa. Ngaphezu kwalokho, abathuthukisi baphinde bahlanganise lesi Siphathi Sokulanda ngaphakathi.
Isizathu sokwengeza lesi siphathi sokulanda ukusiza abalandeli ekusakazeni amavidiyo ngemodi engaxhunyiwe ku-inthanethi. Ngoba abantu emhlabeni wonke bamatasa kakhulu ngomsebenzi wabo wansuku zonke. Esimeni esinjalo, iningi labalandeli alikwazi ukubuka uchungechunge abaluthandayo.
Ngakho nawe uhlangabezana nesimo esifanayo. Ungakhathazeki ngoba lapha ochwepheshe bafaka lesi siphathi esithuthukisiwe sokulanda ukuze ubukele amavidiyo ungaxhunyiwe ku-inthanethi. Ngakho-ke uyazithanda izici ze-pro bese ufaka i-ZBox MM2 Download.
Iziteshi ze-IPTV azivunyelwe lapha.
Amavidiyo asatshalaliswa ezigabeni ezicebile ezihlukene.
Ulimi oluzenzakalelayo olusetshenziswa ngaphakathi kohlelo lokusebenza isiBurma.
Isixhumi esibonakalayo sohlelo lokusebenza silula.
Akukho okubhaliselwe okuthuthukile okudingekayo.
Ungalanda Kanjani ZBox MM2 Android
Inguqulo yakamuva yohlelo lokusebenza iyafinyeleleka kusuka ku-Google Play Isitolo. Kodwa kamuva nje ifayela lohlelo lokusebenza lisusiwe lapho ngenxa yezinkinga ezithile ezibalulekile. Okusho ukuthi manje abasebenzisi be-android abakwazi ukufinyelela amafayela ohlelo lokusebenza kalula.
Ngakho-ke esimeni esinjalo lapho abasebenzisi bengakwazi ukulanda ifayela loqobo le-Apk. Lapho kufanele balande ifayela le-Apk elibuyekeziwe? Ngakho-ke kulesi simo, sincoma abasebenzisi be-android ukuthi bavakashele iwebhusayithi yethu futhi bayilande kusuka lapha mahhala.
Uhlelo lokusebenza esilusekelayo lapha olwangempela. Kodwa asilokothi sinikeze iziqinisekiso kubasebenzisi. Ngoba asilokothi sibambe ama-copyright ohlelo lokusebenza. Ngakho-ke faka futhi ujabulele izici ze-pro zohlelo lokusebenza ngokuzifaka wena engozini.
Inqwaba yamafayela ezicelo ahlobene nokuzijabulisa ashicilelwe futhi abelwane ngawo lapha. Ukuze uhlole lawo mafayela ohlelo lokusebenza ahlobene sicela uchofoze izixhumanisi ezilandelayo. Okukhona I-Foxy APK futhi I-HDHUB4U Apk.
Ngakho-ke ungowaseMyanmar futhi ufuna inkundla yamahhala eku-inthanethi. Lapho ababukeli bengajabulela khona ama-Movie nama-Series abizwa ngeBurma. Khona-ke mayelana nalokhu, sincoma labo basebenzisi be-android ukuthi balande futhi bafake i-ZBox MM2 Apk.
Izigaba Ezokuzijabulisa, Apps Amathegi Uhlelo lokusebenza lwe-Movie, ZBox MM2 Android, I-ZBox MM2 Apk, Uhlelo lokusebenza lwe-ZBox MM2, Ukulanda kwe-ZBox MM2 Imeyili kwemikhumbi
Ukulanda kwe-Foxy Apk Kwe-Android [Ama-movie + Nochungechunge]